Febraayo 2021 - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ilaalinta nabada waa in ay barbar socotaa dhismaha nabada (Uganda)
Edgar Buryahika Kavindi waxay ku doodeysaa inay tahay inaan maalgashi badan ku sameysano dhismaha nabada isla markaana aan awood u yeelan karno inaan abuurno xaalad aan kaliya diirada saareynin nabadeynta, laakiin taa badalkeeda dhisida nabada iyo risiqda nabada. [sii wad akhriska…]
DepEd waxay xoojineysaa dadaallada dhismaha nabadda iyadoo loo marayo waxbarashada (Filibiin)
Waaxda Waxbarshada ee Jamhuuriyadda Filibiin waxay sii wadaa dhismaha dhaqanka nabadda iyo adkeysiga bulshada colaaduhu saameeyeen iyo kuwa nugul si loo hubiyo sii socoshada waxbarashada. [sii wad akhriska…]
Tacliinta sare waxay wax badan ka beddeli kartaa khilaafaadka isla markaana dhisi kartaa nabadda
Sara Clarke-Habibi waxay ku doodeysaa in hay'adaha tacliinta sare ay ka tarjumayaan sida ay si firfircoon uga qayb qaadan karaan yareynta sinaan la'aanta, jahwareerka, xagjirnimada iyo rabshadaha bulshada. [sii wad akhriska…]
Dhallinyarada, nabadda iyo amniga - Buug-gacmeedka barnaamijyada
Qaramada Midoobay waxay soo saartay buug-gacmeed diiradda saaraya ka-qaybgalka dhallinyarada ee dhismaha nabadda. Maalgelinta awooda, wakaaladda iyo hoggaaminta dhisayaasha nabadda ee dhallinyarada waxay xoojin karaan awooddooda ku aaddan inay si wada jir ah u hoggaamiyaan dadaallada nabadda, iyo inay adeegsadaan xirfadahooda si ay ula tacaalaan caqabadaha kale ee iyaga saameeya, inta lagu gudajiray iyo kadibba musiibada COVID-19. [sii wad akhriska…]
Waxbarashada Nabadda oo muhiim u ah carruurta ku nool aagagga colaadda: Diblomaasiyadda
Bixinta waxbarashada nabada ee carruurta ku nool aagagga ay colaaduhu ka jiraan ayaa muhiim u ah xallinta khilaafaadka iyo dagaallada, sida uu sheegay Wasiirka Lataliyaha Nguyen Phuong Tra, Ku-xigeenka Wakiilka Joogtada ah ee Vietnam ee Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay. [sii wad akhriska…]
Hogaamiyaasha iskuulka waxay balanqaadayaan inay balaarin doonaan jinsiyadaha, barashada cadaalada manaahijta
Guddi dugsi ayaa ka wada hadlaya siyaabaha loo ballaariyo barashada caddaaladda jinsiyadda iyo bulshada ee nidaamka iskuulka dadweynaha ee Martha's Vineyard. [sii wad akhriska…]
Markay ahayd Janaayo 22, 2021, cilmiga aqoonta nabada waxaa lumiyey mid ka mid ah "aabayaashii aasaasayaasha" ee aadka loo qadariyo uguna fiicnaa, Professor Abdul Aziz Said. [sii wad akhriska…]
Dhinacyada cilmi-baarayaasha iyo ku-tabobarayaasha ee barashada nabadda, ayaa 27-ka Jannaayo webinar wuxuu sahmiyey natiijooyinka ka soo baxay warbixinta cusub ee ka timid International Alert iyo Golaha Ingiriiska, "Waxbarashada nabadda ee dugsiyada tooska ah: Maxay muhiim u tahay sideese loo qaban karaa?" Warbixinta ayaa ka hadlaysa sida ay waxbarashadda nabadeed ee iskuulladu u egtahay, saameynteeda ka dhalan karto, iyo sida looga dhabeyn karo ficil ahaan. [sii wad akhriska…]
Dib-u-eegista Buugga: "Waxbarashada horumarka: Vol 3" ee Magnus Haavelsrud
Buuggiisii ​​ugu dambeeyay, Magnus Haavelsrud wuxuu u arkaa horumarka nabadeed inay yihiin dhaqdhaqaaqyo salka ku haya sinaan, isu damqasho, bogsiintii dhaawacyadii hore iyo kuwa hadda, iyo isbadalka khilaafaadka aan xasilooneyn. Haavelsrud waxay weydiineysaa oo ka jawaabaysaa sida waxbarashadu u taageeri karto una bilaabi karto dhaqdhaqaaqyada kor u kaca ee heerarka nolol maalmeedka illaa arrimaha adduunka. [sii wad akhriska…]